DOWNLOAD FAKE VOICE 7.0 - MMEMME NYOCHA - 2019
Ezigbo Voice 7.0
Ọ bụrụ na ọ bụla onye ọrụ nwere ike ịnagide ịkwaga foto site na iPhone na kọmputa (ihe niile ị ga - eme bụ imeghe Windows Explorer), ọrụ ahụ dịtụ mgbagwoju anya na ntụgharị nyefee n'ihi na ịdeghachi ihe oyiyi na ngwaọrụ gị site na komputa gị anaghị arụ ọrụ ọzọ. N'okpuru ebe a, anyị na-elebakwu anya otu esi edetuo ihe oyiyi na vidiyo site na kọmpụta gaa na iPhone, iPod Touch ma ọ bụ iPad.
O di nwute, iji nyefee foto sitere na komputa gaa na ngwa iOS, i ghaghi iji iTunes mee ihe, nke bu ugbua nke otutu isiokwu n'ile anyi.
Kedu esi nyefee foto site na kọmputa na iPhone?
1. Tinye iTunes na kọmputa gị ma jikọọ iPhone na kọmputa gị site na iji eriri USB ma ọ bụ mmekọrịta Wi-Fi. Ozugbo mmemme ahụ kpebisiri ike, pịa akara ngosi ngwaọrụ gị na mpịakọta nke mpio ahụ.
2. Na njikwa aka ekpe, gaa na taabụ "Foto". Na nri ị ga-achọ ịlele igbe ahụ. "Mmekọrịta". Site na ndabara, iTunes na-enye gị idetuo foto site na igbe nchekwa Images. Ọ bụrụ na nchekwa a, e nwere ihe oyiyi niile dị mkpa ka e depụtaghachiri na ngwaọrụ ahụ, wee hapụ ihe ndabara "Nchekwa niile".
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịnyefe na iPhone ọ bụghị ihe oyiyi niile site na nchekwa nchekwa, mana ndị nhọrọ, wee lelee igbe ahụ "Ndị nchekwa a họọrọ", n'okpuru ebe ịdere nchekwa ebe ihe oyiyi ahụ ga-edegharị na ngwaọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na foto dị na kọmputa ahụ dị, ọ bụghịkwa na nchekwa na "Images", mgbe ahụ na nso nso "Detuo foto site na" pịa na nchekwa ahọrọ ugbu a imeghe Windows Explorer wee họrọ nchekwa ọhụrụ.
3. Ọ bụrụ na na mgbakwunye na ihe oyiyi ịkwesịrị ịnyefe na ngwaọrụ na vidiyo, ma n'otu window ahụ, echefula itinye akara akara "Gụnye mmekọrịta vidiyo". Mgbe edozire ntọala niile, ọ na-anọgide na-amalite mmalite site na ịpị bọtịnụ ahụ "Tinye".
Ozugbo mmekọrịta ahụ zuru ezu, ịnwere ike ịkwụsị ngwaọrụ ahụ na kọmputa. A ga-egosipụta ihe oyiyi niile na ngwa iOS na ngwa ngwa foto.